Puntland oo wafdi usoo dirtay xafladda caleema-saarka m/weynaha Konfur Galbeed: SAWIRRO - iftineducation.com
Puntland oo wafdi usoo dirtay xafladda caleema-saarka m/weynaha Konfur Galbeed: SAWIRRO
iftineducation.com – Wafdi ka socda dawladda Puntland uuna hogaaminayo wasiirka caddaaladda Puntland Ismaciil Max’ed Warsame ayaa maanta waxay u anba bexeen magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.
Wafdiga ayaa halkaas kaga qayb geli doona caleema saarka Madaxweynaha maamulkaasi Shariif Xasan Sheikh Aadan.
Waxaa ka mid ah wafdiga wasiirada Warfaafinta, Deegaanka, Dastuurka xubno ka tirsan golaha wakiilada iyo madaxtooyada dawladda Puntland.
Dawladda Puntland ayaa si rasmi ah uga qayb galaysa caleema saarka Madaxweyne Shariif Xasan Sheikh Aadan, ka qaybgalkaas oo salka ku haya siyaasadda Puntland ee ku wajahan baahinta nidaamka federaalka ah iyo maamul goboleed-yada waafaqsan dastuurka federaalka ah ee Soomaaliya.
Al-Shabaab oo sheegatay 37 qof oo waaberigii lagu dilay Kenya